Su’aal: Waxaan ka baqanayaa in aanu dhiig iga imaan marka ugu horeysa ee aan galmo sameeyo. Miyaan qaliin sameyn karaa? - Youmo
Jag är rädd att jag inte kommer att blöda när jag har samlag första gången. Kan jag göra en operation? - somaliska
Qoyskeygu waxay leeyihiin waa in aan bikrad ahaato marka aan guursanaayo. Waxay leeyihiin waa inuu jirro dhiig sariirta ku daadanaaya, marka ugu horeysa ee aan galmo sameeyo. Waxaan ka baqanayaa in aanay taasi dhicin. Waxaan maqlay in halkaas lagu toli karro xuub bikir ah. Taasi ma wax socon karaa?
Hablaha intooda badan ma dhiigaan marka ugu horeysa ee ay galmo sameeyeaan. Haddii uu dhiig ka yimaado ayay taas ku xidhan tahay iyaga oo aan xoog u kacsan oo aan qoyaneyn.
Afka siilka kuma yaalo wax xuub ah oo qarinaaya. Dhiiga caadadu kama uu soo bixi karri laheyn haddii uu xuub jiro. Xuubka bikrada ayaa ah khuraafaad. Sidaas daraadeed ayaanan suurtogal u aheyn in wax lagu tollo halkaas. Qaliinka ay dadka qaar sameeyaan ayaan waxba tarin.
Waxa sidoo kale arin wanaagsan ah in aan qofna arki karin haddii aad galmo samaysay iyo haddii kale. Xataa dhakhtar ama kallaaliso ayaa haddii ay baaritaan sameeyaan aan arki karin inaad galmo sameysay. Tani waxay ku xiran tahay iyada oo uu siilku sii ahaan doono isla sidiisii hore ee uu ahaa.
Iskuday in haddii ay suurtogal tahay aad arrintan qoyskaaga kala hadasho. Waxaad tusi kartaa qoraallada iyo sawirrada ku saabsan siilka ee halkan Youmo.se ku yaal. La xiriir ungdomsmottagning, socialtjänsten (adeega bulshada) ama booliiska haddii aad si uun ugu dareemeyso cabsi ama hatidaad.
RFSU: Warega Siilka
MawduucSawiro taxan: Ma jiro wax xuubka bikirka ahi
MawduucQoyskeyga go’aan miyuu ka gaarayaa noolasheyda?